Kolontsaina marobe - Chengdu Dacheng New Energy Techenology Co. Ltd.
Inona no mahatonga antsika hisisika amin'ny fanangonan-karena, ny fanavaozana ary ny fampivoarana ny traikefa miaramila mihoatra ny 20 taona amin'ny famahanana fitaovana sy ny teknolojia fanangonana bateria lithium? Manomboka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famolavolana, famokarana, fanavaozana hatramin'ny varotra manerantany. Mikiriza amin'ny fikatsahana zava-bita miavaka sy fomba fiainana miavaka, ary ataovy izay rehetra azo atao.
Mamorona tontolon'asa miasa tsara sy mahomby, ataovy izay hahatonga ny mpiasa hahatsapa ho mahazo aina, feno firehetam-po sy fitiavana miasa. Manaova zavatra misy heviny amin'ny toe-tsaina miabo, mankafy ny fahafinaretana amin'ny asa, mahazo fahatsapana fahombiazana, ary mahatsapa ny hasarobidinao.
Fanavaozana maharitra, fiaraha-miasa mandresy fandresena
Fanavaozana maharitra, fiaraha-mientana mandresy fandresena Dacheng New Energy Technology Co., Ltd. dia tarihin'ny hevi-pampandrosoana siantifika, mamolavola paikady fampandrosoana ary mampihatra azy ireo mifanaraka amin'ny tena toetran'ny orinasa. Mampiroborobo fatratra ny fampandrosoana amin'ny fandrindrana ny fitomboan'ny harinkarena, sosialy ary ny mpiasa;
Ny toekarena eo amin'ny tsena dia tsy toekarena mifaninana ihany, fa toekarena fiaraha-miasa sy toekarena fiaraha-miasa ihany koa. Tsy azo ihodivirana ny fifaninanana fa ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa no firoboroboan'ny ho avy.
Ny làlana ho avy amin'ny famokarana fiara dia ny fampandrosoana maitso. Ao amin'ny tontolon'ny indostrian'ny fiara mandeha angovo vaovao dia niditra amina làlana fampandrosoana lehibe izy io, ary nanjary hery vaovao amin'ny salantsalany sy ny hafainganam-pandeha, ny hafainganam-pandeha ary ny fitaterana lavitra. ny rafitra herinaratra ary hampiroborobo ny fanovana ny rafitry ny indostrian'ny fiara, izay sarobidy amin'ireo firenena manerantany. Izahay dia mpamatsy singa lehibe ho an'ny fiara elektrika hahatratrarana "fahombiazana avo, fiarovana ny tontolo iainana ary fitsitsiana angovo".